चुस्न छोडौँ कमरेड ! अब श्रमजीवि पत्रकारका जीवन र जवानी - Sarokar Khabar
४ असार २०७७, बिहीबार १३:५७
ओखलढुंगाको धुसेनीमा जन्मिएर प्राथमिक शिक्षा पुरा भए सँगै बुवाआमाले डोहो¥याउँदै २०४९ मा सिन्धुलीको दुधौली–१ झार्नुभयो । दाजुहरुको प्रेरणाले नबुझी–नजानी कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेको मलाई बाल्यकालदेखि नै राजनीतिको रस पसेको थियो । अरु सहपाठी भन्दा फरक सोच्ने मेरो बानीले स्कूले उमेरदेखि नै पढाईको अतिरिक्त अनेरास्ववियुमा क्रियाशील बनायो । भर्खरै शुरु भएको जनयुद्ध र रगतै तताउने क्रान्तिकारी साँस्कृतिक कार्यक्रमहरुले पनि मलाई तान्यो । समयको क्रमसँगै ऋषिराज देवकोटा ‘आजाद’ को रगतले सिञ्चित सिन्धुलीको माटोमा मेरो विद्यार्थीकाल र उर्वर युवावस्था आजादकै झण्डा उठाउन लागिरह्यो ।
घनिष्ट बनेको नाटक गर्ने नेताको एकतर्फी उपयोगवादी नीतिको मैले खुलेरै बिरोध गरे । तिनै कमरेड दलबल सहित आए मेरो कार्यालयमा मानहानी गरेको भन्दै थर्काउन ! आफ्नै श्रम र सीपले डेढ दशकमा जोडेको ४ आना जग्गा पनि गुमाएको मलाई न डर थियो न त आश नै । मैले संकल्प गरेको छु–साँच्चिकै सर्वहारा भएको मलाई गुमाउन केहि छैन तर जित्नको लागि सारा संसार नै छ । आफू क्षणिक रुपमा सफल भई अर्कोलाई सडकमा पु¥याएकोमा प्रशन्न हुनै पर्दैन कमरेड म त झन्–झन् संकल्पित र दृढ बन्दै गएको छु ।
छलफलमा साथीहरुको कुरा सुन्दा लाग्थ्यो, मुलुकका सबै जनप्रतिनिधिहरु अर्कै ग्रहबाट झरेर आफ्नो जीवनकालभरी हामीलाई शासन गर्न आएका हुन् । यस्तो आक्रोश पोख्ने साथीहरु अरु कोहि नभएर तिनै नेतालाई कुर्सीमा पु¥याउने थिए । अधिकांश साथीहरुको आक्रोश, वेदना र बेचैनी यस्ता नेतालाई जिताउन लागेकोमा देखिन्थ्यो । आफैंले निर्वाचनमा जिताएका नेता कमरेडहरु सहयोग गर्नु त परको कुरा, भेटेर गफगाफ गर्न समेत तयार छैनन् । पत्रकारको फोन उठाउनु उनीहरुको कर्तव्य होईन । आक्ककल–झुक्कल उठाउने फोनमा प्राय एउटै जवाफ आउँथ्यो । अहिले म व्यस्त छु, केहि दिनमा सम्पर्क गर्नुहोला । पटक–पटकको फोनपछि त्यो केहि दिन ३ वर्षसम्म नआएको अनुभव आफैंमा पिडादायी थियो ।
साथीहरुको भावनामा केहि मल्हम लगाउन सकिन्छ भनेर मैले लकडाउनको बीचमै केहि पालिका प्रमुख–उपप्रमुखलाई उहाँहरुकै कार्यकक्षमा गएर भेटे । छलफलमा मैले भने,“तपाईले विकास निर्माणको काम त राम्रो गर्नुभएको केहि साथीबाट सुनिन्छ तर व्यवस्थित प्रचार भएको त देखिएन नि ? आफूले गरेका कामहरुको प्रचारमा कत्तिको ध्यान पु¥याउनु भएको छ ? “प्रायः प्रमुख–उपप्रमुखको जवाफ हुन्थ्यो–पत्रकारहरु खाली माग्न मात्र आउँछन्, खान मात्र खोज्छन् । जाबो लेखेको र प्रचार गरेको पनि पैसा लाग्छ र ? म त फोन नै उठाउँदिन । उठाउनै परे र भेटें नै भनेपनि म त वास्तै गर्दिन ।
मैले फेरी सोधें, “कमरेडहरुले आजसम्म कतिवटा मिडिया वा मिडियाकर्मीहरुलाई सहयोग गर्नुभयो त ? असहज नमानी प्वाक्कै भन्छन कमरेडहरु–त्यस्तो त खासै कसैलाई पनि गरेको छैन । हामीले गरेको काम फेसबुकमा हालेकै छौँ । गरेका कामहरु जनताले देखेकै छन् । १र२ वटा पत्रकारले नराम्रो लेखेका थिए, झपारियो । त्यस्ताले लेखेर हामीलाई केहि फरक पार्दैन । पत्रकार भएपछि त हाम्रा कामहरु सित्तैमा प्रचार गरिदिनुप¥यो नि !
प्रिय जनप्रतिनिधि ज्यूहरु
जनयुद्ध, जनआन्दोलन हुँदै तपाईलाई सत्तामा पु¥याउनसम्म आफ्नो श्रम, सीप र वौद्धिकताको प्रयोग गरेका हजारौँ पत्रकारहरु अहिले आफू बाँच्न र आफ्नो संस्थामा कार्यरत साथीहरुलाई टिकाईराख्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कोरोना भाइरसको प्रभावसँगै सबै साना र मझौला संचारमाध्यमहरु रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । बीग हाउसका प्राय संचारमाध्यमहरु यो वा त्यो बहानामा विदेशी लगानीमा फस्टाएकै छन् । त्यस्ता संचार माध्यमहरुले तपाईका राम्रा कामहरुको प्रचार गर्नुभन्दा गरेका कमजोरीहरु पत्ता लगाउन ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । पत्ता लगाएर कत्तिलाई रक्षात्मक त कत्तिलाई विस्थापित नै गरेका छन् । तर जसले तपाईको कामको निःस्वार्थ प्रचार गरे । गरिरहेका छन् । त्यस्ता संचारमाध्यम कहिल्यै तपाईको प्राथमिकतामा पर्दैनन्, किन ?
केशव देवकोटाद्धारा केन्द्रिय सदस्यको उम्मेदवारी घोषणा ४ असार २०७७, बिहीबार १३:५७
गुट रहित पार्टी बनाई जिल्लामा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउछु : पोख्रेल ४ असार २०७७, बिहीबार १३:५७
कविता : दिउ अरुलाइ नै दोष दिउ ! ४ असार २०७७, बिहीबार १३:५७
सेवा निवृत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सम्मानित ४ असार २०७७, बिहीबार १३:५७
सिलवन्दी टेण्डर आह्वानको सूचना ४ असार २०७७, बिहीबार १३:५७
प्लानद्धारा कोभिड संकट ब्यवस्थापन केन्द्रलाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान ४ असार २०७७, बिहीबार १३:५७
कोभिड–१९ अस्पतालाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान ४ असार २०७७, बिहीबार १३:५७
गोलन्जोरमा कृषकलाई राँगा र बोका वितरण ४ असार २०७७, बिहीबार १३:५७
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुरोध ४ असार २०७७, बिहीबार १३:५७
दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन रकम वितरण ४ असार २०७७, बिहीबार १३:५७